VaMugabe naVaTsvangirai Voita Misangano yeKumisa Mhirizhonga
Gumiguru 01, 2010
Sangano reNational Security Council, NSC, rasangana neChishanu kuti rizeye nyaya yemhirizhonga iyo iri kupararira nenyika. Mhirizhonga iyi inonzi yava kukonzera zinyekenyeke muhurumende yemubatanidzwa.
Musangano weNSC uyu wanzi wanga uchikandiranwa makobvu nematete uye watevera mumwe musangano wakaitwa neChina pakati pevatungamiri vatatu vari muhurumende yemubatanidzwa.
Musangano wevatungamiri vatatu vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, uye mutevedzer wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, wakataura nyaya yemisariridzwa yezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa muhurumende yemubatanidzwa, uye mhirizhonga iri kuitika pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vatatu ava vange vari mumusangano weNSC vachitaura zvikuru nyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika.
VaTsvangirai vanonzi vati vafuratidzwa moyo nevamwe mumauto, mapurisa nevasori avo vari kuita basa rekurova nekutyisidzira vanopikisa Zanu-PF. Asi VaMugabe nevakuru vechiuto vanonzi vatiwo kana vatsigiri veMDC vari kuitawo zvemhirizhonga.
Dare reNSC rinonzi razeyawo chikumbiro cheCopac chekuti makurukota ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika, pamwe nemukuru wemapurisa, vabude nehurongwa hwakajeka hwekuti vachadzivirira sei mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaEarnest Mudzengi, vanoti misangano yakadai haina chainobatsira.